देश छोडेर पलायन हुने पत्रकारहरुको संख्या बढ्दो .... | EuropeNepal.Net
देश छोडेर पलायन हुने पत्रकारहरुको संख्या बढ्दो ....
Europe Nepal Tuesday, April 15, 2014
देशका ४० लाख भन्दा बढी युवाहरु विदेश पलायन भइसकेको तथ्यांक यदाकदा सार्वजनिक भइरहने गर्छ । युवा पलायनको मुख्य कारण बढ्दो बेरोजगारी समस्याला...
देशका ४० लाख भन्दा बढी युवाहरु विदेश पलायन भइसकेको तथ्यांक यदाकदा सार्वजनिक भइरहने गर्छ । युवा पलायनको मुख्य कारण बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई मान्ने गरिएको छ । तथापी रोजगार भएकै व्यक्तिहरु पनि राम्रो अवसरका लागि विदेशिने गर्छन ।
More than 40 million young people have been fleeing the country abroad to remain public figures rarely does. The main reason for the growing youth unemployment problem of incursions has been divided. However good opportunity for overseas employment also do not pass people.
पेशागत हिसाबले सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरु विदेशिए पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेकाहरु भने पेशागत समस्याको कारण देखाएरै विदेश छिरेका छन् । हालै एक पत्रकार रोजगारीका लागि कतार पुगेको प्रसंग जति नै चर्चामा भएपनि मौका पाए विदेश छिर्न लालयीत पत्रकारहरुको संख्या ठूलो छ ।
Professional journalism is working on all areas of people videsie those who caused the problem dekhaerai professional foreign invocation. A journalist recently reached the queue for employment, despite the opportunity to newsletter Relevance even greater number of foreign journalists to enter the lalayita.
त्यति मात्रै होइन, कुनै समय नेपालमा पत्रकारिता गरेर चर्चाको शिखरमा पुगेकाहरु पनि अहिले विदेशिएका छन् । ती मध्ये अधिकांशले अरु नै काम गरेका छन् भने केहीले पार्ट–टाइम पत्रकारितालाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यस्ता पत्रकारहरु आफू पुगेकै देशमा संगठित हुने क्रम पनि बढेको छ ।
Not only, but no time whatsoever pugekaharu journalism by the victims are now. Many of those same things are said, some other part - time continues to have difficulty. Such journalists will be organized in order to land his mates also increased.
जो पलायन भए…
कुनै बेला नेपाल टेलिभिजनकी चर्चित समाचार वाचिका रहेकी रमा सिंह अहिले अमेरिकामा छिन् । सरकारी जागिरे जीवन टुङ्ग्याएकी रमा अहिले आफ्नी छोरीसहित अमेरिकामा बस्छिन् र नेपाली भाषाको टेलिभिजन सञ्चालन पनि गरिरहेकी छिन् । उनको फेसबुक एकाउण्टमा उनको नाम पछाडी अझै पनि “नेपाली टेलिभिजनकी छोरी” लेखिएको छ । उनी स्वयंले भने नेपाल छाडिसकेकी छिन् ।
नेपालको चर्चित एक्सिस मेडियाका सस्थापक तथा धेरै एफ एम मा कार्यक्रम संचालक गरेका बिनोद खड्का हाल युरोप मा बस्दै आयको बर्षौ भएको छ । उहा कीप्स एफ र अभियान एफ एम को स्टेशन म्यानेजर समेत हुनुहुन्थ्यो । हाल अनलाइन पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व महासचिव तरुण पौडेल पनि अमेरिकामै छन् । कुनैबेला युनियनको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनेका पौडेल स्पेसटाइम दैनिकमा काम गर्थे ।
प्रेस युनियनको हालसमेत उपाध्यक्ष रहेका र कुनैबेला अन्नपूर्ण पोष्टमा स्पोर्टस ब्यूरो प्रमुख रहेका पत्रकार हेमन्त काफ्ले पनि अष्ट्रेलिया पुगेका छन् । १ वर्ष अगाडी अष्ट्रेलिया पुगेका उनीपनि पत्रकारिता बाहेककै काममा रमाइरहेका छन् ।
प्रेस युनियन ललितपुरकै अध्यक्ष रहदा एभिन्यूज टेलिभिजनका राजु थापा क्यानडा पुगे भने प्रेस युनियन काठमाडौंमा समानान्तर समिति रहदा एउटा समितिको अध्यक्ष बनेका अनारसिंह बस्नेत पनि अमेरिकातिरै रमाइरहेका छन् ।
च्यानल नेपालमा कुनैबेला कार्यरत रहेका पत्रकारहरु तारा रावल र थानेश्वर न्यौपाने अहिले अमेरिकामै रमाइरहेका छन् । पत्रकार महासंघ नुवाकोटका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका विश्वमित्र खनाल पनि पेशा संगै देश छोडेर अष्ट्रेलियामा जीवन बिताइहरेका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनमा लामो समय काम गरेका पत्रकार तोया दाहाल परिवारसहित अमेरिका छिरेको २ वर्ष बितिसकेको छ कान्तिपुरकै खेल सम्पादक रहेका पत्रकार विष्णुहरी घिमिरे हालै अमेरिका पुगेका छन् ।
एभिन्यूज टेलिभिजनमा लामो समय काम गरेर हिमालय टेलिभिजनमा समाचार संयोजक बनेका सुदीप पोखरेल पनि बिहेपश्चात पत्नीसहित अमेरिका पुगेका छन् । उनी पनि पत्रकारीता संगै देश छोडेका पत्रकार हुन् । हिमालय टेलिभिजनकै दउश्य सम्पादक क्रिस दुलाल पनि हालै अमेरिका पुगेका छन् । उनी नेपालका चर्चित विकी सम्पादक पनि हुन् ।
कुनै बेला एबिसी टेलिभिजनमा काम गर्ने किशोर पन्थी र सूर्य थापा पनि अमेरिका तिरै रहेका छन् । देश छोडेपनि उनहिरुले अहिले पत्रकारितालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
एभिन्यूज टेलिभिजनको कार्यक्रम खबर भित्रको खबरबाट चर्चामा आएका सुमन गिरी र कृष्ण न्यौपाने दुवैजना न्यूजील्याण्ड पुगेका छन् । एभिन्यूजमै समाचार वाचिका रहेकी माधुरी विष्ट अमेरिकामा छिन् भने एभिन्यूजकी पूर्व अर्थ ब्यूरो प्रमखु आशा थपलिया भारतमै घरजम गरेर बसेकी छिन् ।
सगरमाथा टेलिभिजनमा अपराध बिटमा काम गरेका ऋषि बुढाथोकी अष्ट्रेलिया छिरेको २ वर्ष बढी भइसकेको छ भने एभिन्यूजबाट कान्तिपुर पुगेका मनोज घिमिरे पनि अमेरिका पुगेको वर्ष काटीसकेको छ ।
पत्रकारितामा आर्थिक भविष्य सुनिश्चित नदेखेपछि पढ्ने र कमाउने दुवै लक्ष्य राखेर एन्टेना फाउन्डेसनका दिक्पालदेव पंगेनी अष्ट्रेलिया पुगेको पनि धेरै भइसकेको छ ।
हेडलाइनस एण्ड म्युजिक एफ एम हुदै नेपालवाणी नेटवर्ककमा काम गरेकी दुर्गा बस्नेत अध्ययनका लागि भन्दै हालै जापान पुगेकी छिन् भने न्यूज २४ का दिपक गौतम पनि चैत महिनामा जापान पुगेका छन् ।
माउन्टेन टेलिभिजनमा कुनै बेला समाचार प्रमुख रहेका पुरुषोत्तम लम्साल कमाउनकै लागि अमेरिका पुगेका छन् । च्यानल नेपालमा काम गरेका पुरुषोत्तम ढकाल पनि अमेरिका पुगेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट छोडेर दुरसञ्चार डट कम सञ्चालन गरेका पत्रकार मदनमणि अधिकारी पत्नी संगीता घिमिरेसहित हालै अष्ट्रेलिया पुगेका छन् ।
नेपाल समाचारपत्रका पूर्व चिफ रिपोर्टर किशोर सापकोटा पनि रोजगारीकै खोजीमा अमेरिका पुगेका छन् । नागरिक दैनिककमा कार्यरत रहदा नै पत्रकार रामचन्द्र भट्टपनि अमेरिका छिरिसकेका छन् ।
पत्रकारितासंगै देश छोडेर पलायन भएका अन्य पत्रकारहरुमा दधि सापकोटा, बिजय घिमिरे,भगवान खड्का,दिनेश पाखरेल,रामप्रसादखनाल,कविकिरण न्यौपाने,पुरु कट्टेल,थानेश्वर सापकोटा, नृपेश उप्रेत,अजित देवकोटा,सुशील खरेल लगायतका छन् ।
विदेशीएका पत्रकारहरुको सूची यत्तिमै सकिदैन । अधिकांश पत्रकारहरु अध्ययनका लागि विदेशिकएको दावी गर्छन् । तर यथार्थतामा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुको दुरावस्था र अनिश्चित भविष्य नै पत्रकारहरुका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता बन्ने गरेका छन् । यसरी विदेशिएका पत्रकारहरमध्ये कतिपय शरणार्थी भिसा बनाएर पनि विदेशिएका छन् ।
हाल पत्रकारितामा रहेका सुनीता पोखरेल, रोजिता कडेंल, अनुज थापा लगायतका पत्रकारहरु पनि छिट्टै विदेशिने तयारीमा रहेका छन् ।प्राय अमेरिका र युरोप पलायन हुने गरेको देखिन्छ ।
विदेशिने मध्ये अधिकांश पत्रकारहरु अमेरिका पुगेका छन् । पत्रकारहरुका लागि भिषा र ग्रीनकार्ड पाउनका लागि अमेरिकामा धेरै सहज रहेको बताइन्छ । अमेरिका पुगेका पत्रकारहरुको संगठन नेपाल अमेरिका जर्नालिष्ट एसोसियसनमा मात्रै डेढ सयभन्दा बढी नेपालमा पत्रकारिता गरेर गएकाहरु छन् । उनीहरुको नामावली यहाँ छ ।
विदेशिएका पत्रकारहरुले आफ्नो आर्थिक भविष्य विस्तारै सुनिश्चित गरेकै छन् भने कतिपयले अध्ययनलाई निरनतरता पनि दिइरहेका छन् । तर पत्रकारिता क्षेत्रका समस्याहरुका कारण विदेश जानपनि नसकेर कामलाई निरन्तरता दिन पनि नसकेर पेशासंगै राजधानी छोडेर घर फर्केका पत्रकारहरुको संख्या अझ बढी छ ।
EuropeNepal.Net: देश छोडेर पलायन हुने पत्रकारहरुको संख्या बढ्दो ....